လက်နက်ချချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျနော့်အတွေးကို လာမဲ့အပတ်မှာ တင်ပြချင်ပါတယ်။ သဘောမတူတဲ့လူများမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သို့ သော် စဉ်းစားမိတာကို လျှိူ့ ဝှက်မထားချင်ပါ။ ဘာ့ကြောင့်လက်နက်ချ ချင်တာလဲဆိုတော့...ဗကပ နဲ့ပြည်ချစ်လို ပြည်ပမှာ တစ်သက်လုံးသောင်တင်နေမှာကို စိုး၇ိမ်လို့ ပါ။ အစိုး၇လည်း အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စတဲ့ အဖွဲ့ တွေကို အပျက်မတိုက်နိုင်ပါ။ အတိုက်အခံကော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေကော အစိုး၇က အပျက်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သူမှ ပြတ်ပြတ်သားမလုပ်နိုင်တာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာနေပြီ။ ကျနော်ကတော့ ပြည်ပမှာ နေ၇တာ အ၇မ်းစိတ်ပျက်နေပြီ။ ပြည်တွင်းမှာ ဝင် ပြီး အစိုး၇ခင်းပေးတဲ့ နိုင်ငံေ၇း လမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ ဆိုလိုချက်က ကျနော်လက်နက်ချ ချင်နေပြီ။ မလုပ်ခင် အားလုံးကို ကြိူတင်အသိပေးပါတယ်။ သူများတွေလို ခိုကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ တော့ ၇န်ကုန်ကို မပြန်ပါဘူး။ လက်တွေ့ တော့ အကောင်အထည်မဖော်၇သေးပါ။ စဉ်းစားချက်ကို တင်ပြနေတာပါ။ သဘောတူတဲ့သူ၇ှိ၇င် ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ပြည်ပမှာတော့ အသက်ကြီးပြီး မသေချင်ဘူး။ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားနေ၇င် ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှ အိမ်ပြန်၇မှာလဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, August 07, 2011
အေးကွ - ဂုံးကျော် ရ မင်းအတွေးမှန်တယ်၊ အခု ပြည်ပမှာ (မြန်မာပြည်အပြင်မှာ) နေရတာ အထဲမှာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ၊ အတိုးချုန်းပြောရရင် ရေစုံမီးစုံပေါ့ကွာ နွားရောလှည်းရော အားလုံး အစစအရာရာ အဆင်သင့်ပဲပေါ့ကွာ၊ သိုပေသော်ငြားလဲ အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ အဝေး နေနေရတာ ကြာတော့ ညစ်လာတယ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ အပြင်မှာအဆင်ပြေပြေ အထဲကိုပဲ တမ်းတတယ် ၊ ဒါ သဘာဝပဲ (များသောအားဖြင့်ပြောတာနော် ) ပြည်ပကိုပဲ အပြီး ဖေါ်ဂွဒ် လိ်ှမ့်သွားတဲ့ သူတွေရှိပေမယ့်လဲ မတူဘူးလေကွာ၊ ဒီလိုသာဆက်နေသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းတို့ ငါတို့ လူ့သက်တမ်းက တဝက်ကျိုးနေပြီ၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီစံနစ်ရဲ့ အသီးအပွင့်တွေလဲ ခံစားခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့တဲ့ နည်းတူ အေးရာအေးကြောင်းပဲ ရွာပြန်နှပ်နေတာ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးအရိပ်တော်မှာ နေခွင့်ရချင်နေပါပြီကွာ -
U r dreaming.Go and stay there.U can not live more than6month.U will meet many unjustic affairs.When u meet,can u keep ur mouth?U cant.If u r an auzi citizen,u can come back .U have to prepair2way.Dont do one way.If u do one way,its the biggest mistake in ur life.
REMEMBER,U CAN NOT LIVE MORE THAN6MONTHS.People r cheating eachother because of economy,no electrict city,10 house head man show power to u,every where corruption........Dont make the biggest mistake in life.If u can come back when u r not happy,thats o.k.i will not against u.
ဘုန်းကျော်ရေ စိတ်ကူးမယဉ်ပါနဲ့ကွာ၊ Hero လဲ မလုပ်ချင်ပါနဲ့တော့၊ မင်းလိုဘဲနိုင်ငံကိုချစ်လို့ မိသားစု ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နေချင်တာ လူတိုင်းပေါ့ကွာ၊ဒါပေမဲ့ ငါတို့တိုင်းပြည်က လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေပြီကွ။မင်းတကယ် ပြန်ချင်ရင် ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးပွားနေတဲ့ကောင်တွေကို ယှဉ်ပြီး ဖဲ့နှိုင်ရင်တော့ လုပ်ပါ ၊ အားပေးတယ်။ ဒါတောင် မင်းမှာ ငွေအားတစ်ခုထဲနဲ့ယှဉ်ရင်တောင် မင်းကို ၀ိုင်းkick လိုက်လိမ့်မယ်။ စောင့်ကြည့်ပါဦးကွာ။အချိန်တော့ပေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။